एनसीसीको झण्डै साढे चार लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्युनतम मुल्य कती ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > एनसीसीको झण्डै साढे चार लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्युनतम मुल्य कती ?
एनसीसीको झण्डै साढे चार लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्युनतम मुल्य कती ?
काठमाडौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकको चार लाख ३३ हजार ४२ कित्ता शेयर लिलाम बढाबढमा विक्री हुने भएको छ । बैङ्कको संस्थापक सेयरधनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर माघ २१ गतेदेखि विक्री गर्ने भएको छ ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले एनसीसी बैंकको चार लाख ३३ हजार ४२ कित्ता शेयर लिलाम बढाबढमा विक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । यस लिलामी विक्रीका लागि कम्पनीले एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई विक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
लिलामीका लागि न्युनतम मुल्य १७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बोलपत्र दाताले सो भन्दा बढी मूल्य अंकित गरि न्यूनतम एक सय कित्ता देखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । माघ २८ गतेसम्म क्यापिटलको कार्यालय लाजिम्पाटमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सकिने जनाईएको छ ।
माघ २९ गते एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडको कार्यालयमा दिउँसो ४ बजे बोलपत्र खोलिने इस्योरेन्सले जनाएको छ ।
२०७४ माघ १९ गते १४:१५ मा प्रकाशित
सीमसार क्षेत्रका जिवजन्तुको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी सहित सौराहाको पर्यटक आगन्तुक केन्द्र पुनःसञ्चालनमा
निगमको जहाज बिग्रिएर भोजपुरमै ग्राउन्डेड
लघुवित्तको ११ करोड कित्ता सेयर भर्ने हैन त ? खुल्यो आजबाट !
बुक क्लोजको मिति याद गर्नाेस्,कसमसले ११.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
राजधानीबासिलाई खुशीको खबर, मेलम्चीको पानीले दशैं मनाउन पाइने